Xanuun - Sorrento Therapeutics
Xanuun la xidhiidha Arthritis jilibka
Xannuunka la xidhiidha kansarka da'da
RTX (resiniferatoxin) waa unug faragelin neerfaha ah oo gaar ah kaas oo si heersare ah loo xushay waxaana laga yaabaa in lagu dabaqo durugsan (tusaale, xannibaadda dareemayaasha, intra-articular) ama meel dhexe (tusaale, epidural), si loo xakameeyo xanuunka daba dheeraada ee xaalado badan oo ay ka mid yihiin arthritis-ka iyo kansarka.
RTX waxay awood u leedahay inay noqoto daawada heerka koowaad ee wax ka qabashada xanuunka hadda aan la dabooli karin ee hab cusub oo gaar ah, iyada oo la beegsanayo neerfaha ka masuulka ah gudbinta calaamadaha xanuunka daciifka ah.
RTX waxay si xoog leh ugu xidhan tahay TRPV1 reseptors iyo ciidamada furaya kanaalada calcium ee ku yaala dhamaadka-terminal ee neerfaha ama soma ee neuron (iyadoo ku xiran dariiqa maamulka). Tani waxay iyaduna keentaa qulqulka qulqulka gaabis ah oo joogtada ah kaas oo si degdeg ah u horseedaya tirtirka unugyada TRPV1-positive.
RTX waxay si toos ah ula falgashaa unugyada neerfaha afferent iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan dareenka sida taabasho, cadaadis, xanuun ba'an, dareenka gariir ama shaqada iskudubarid muruqa.
Maamulka dareemaha dareemaha ee durugsan waxay keenaysaa saamayn ku meel gaar ah oo joogto ah si loo daweeyo xanuunka la xidhiidha arthritis-ka jilibka.
RTX waxay suurtogal u tahay inay ka caawiso bukaanka xanuunka kansarka ee dhamaadka ah, ka dib hal cirbadeynta epidural, adoo si joogta ah u xannibaya gudbinta calaamadaha xanuunka ee unugyada burooyinka ilaa ganglion rootiga dhabarka (DRG) ee xudunta laf-dhabarka, iyada oo aan lahayn waxyeellooyin aan loo baahnayn oo la xidhiidha qiyaasta sare iyo soo noqnoqda ee opioids. Haddii opioids ay ka sii ahaato qayb ka mid ah arsenal daweynta bukaankan, RTX waxay awood u leedahay inay si weyn u dhinto tirada iyo inta jeer ee isticmaalka opioid.
RTX waxa siisay Heerka Dawooyinka Agoonta Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Maraykanka si loogu daweeyo cudurada marxaladda dhamaadka, oo ay ku jiraan xanuunka kansarka ee aan la daweyn karin.
Sorrento waxay si guul leh u dhamaystirtay caddaynta bukaan-socodka ee Wajiga Ib ee caddaynta fikradda ee Machadka Qaranka ee Caafimaadka ee hoos yimaada Heshiiska Cilmi-baarista iyo Horumarinta ee Iskaashatada (CRADA) kaas oo muujiyay xanuunka soo fiicnaaday iyo hoos u dhigista isticmaalka opioid ka dib maamulka gudaha (si toos ah u galay booska laf dhabarta).
Shirkaddu waxay bilawday daraasado muhim ah waxayna hiigsanaysaa xeraynta NDA sanadka 2024.